Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Daawo:- Shir Ay Yeesheen Xukuumada Kilalka 5aad Iyo Shacabka Gaashaamo oo Is Afgarad Ku Dhamaaday
Daawo:- Shir Ay Yeesheen Xukuumada Kilalka 5aad Iyo Shacabka Gaashaamo oo Is Afgarad Ku Dhamaaday
Jun 12, 2016 SOMALI NEWS 0
Harowo – Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 3dii bisha Sane, 2008TI kadhacay hoolka shirarka ee magaalada gaashaamo Shir ay isugu yimaadeen waxgaradka degmada gaashaamo iyo xukuumada DDSI gaar ahaan saraakiil sare oo ciidanka qaranka ah, federal booliska, ciidanka liyuu booliska iyo mas’uuliyiinta gobolka iyo degmada gaashaamo.
Hadaba ujeedada shirkan ayaa ahayd in si dhab ah loo qiimeeyo xaaladii kadhacday qabalaha Jaamac-dubad ee degmada gaashaamo.
Sida aan lawada soconay waxaa baryahan danbe jirtay been iyo propaganda laga sameeyay dhacdadii kadhacday qabalaha jaamac-dubad oo isasoo taraysay. Dad badan oo mahubsade iyo balaayo abuur udhashay oo ay udheer tahay cadiifad qabiil ayaana abuurayay beenta aan loo meel dayin ee aan sal iyo raad toona lahayn ee iskaqorta ah.
Si kastaba ha ahaatee, shirkan maanta dhacay ayaa si qoto-dheer looga wada hadlay sidii ay xaaladu udhacday bilaw ilaa dhamaad. Waxaana la isla meel dhigay khaladka goobtaas kadhacay iyo cida iskaleh mas’uuliyada khasaaraha kadhashay. Ugudanbayna, wuxuu shirku kusoo gabagaboobay si guul iyo nabadgelyo ah.
Xaqiiqada dhacdadu udhacdayna waxaa la islaqaatay inay ahayd sidan hoos kuqoran:
Waxaa 27kii bishii Ginbood 2008TI maalintii sabtida ahayd, si kadis ah isugu dhacay baabuurka ambulanceta ee degmada gaashaamo oo markaa gar-gaar caafimaad ugu sugnaa tuuladaBooda-dheere ee degmada gaashaamo iyo baabuur kontaraban siday oo bilaa taariko ah.
Kadibna, darawalkii waday gaadhigii kontarabanku saaraa ayaa maadaama gaadhiga uu watay uu bilaa taariko ahaa islamarkaana uu ahaa gaadhi sharci daro ah intuu taayiradii gaadhiga naqaska kasaaray birana kalabaxay ayuu baxsaday si uu uga hortago inaan gaadhiga iyo isaga toona sharciga loo horgaynin.
Markaas kadib ayaa waxaa arinta maqlay ciidanka federal booliska. Waxaana goobtii tuulada booda-dheere tagay 15 askari oo isugu jirtay: ciidanka difaaca qaranka, federal boolis iyo liyuu boolis. Ciidankan 15ka ah ayaa maadaama uusan gaadhiga kontarabanka ahi usoconaynin oo taayiradii laga banjariyey waxay habeenimadii seexdeen tuuladii booda-dheere. Waxaana islahabeenkiiba si kadis ah ugu soo galay tuuladii gaadhi kayimid Hargeysa oo siday kontaraban islamarkaana ahaa gaadhi sharci daro ah. Waxaana qabtay ciidankii halkaa kusugnaa gaadhigii iyo alaabtii saarnaydba.
Ugudanbayn, waxaa aroornimadii 28ka bisha Ginbood yimid ciidan liyuu boolis ah oo watay gaadhi wayn iyo makaanig si loogu qaado gaadhigii uu darawalku xumeeyay ee bilaa taarikada ahaa kontarabaankana siday. Waxaana tuulada booda-dheere kasoo ambabaxay ciidankii oo wada labadii baabuur ee kontarabanka ahaa iyo ambalaastii.
Waxaana xiligaas dhexda usii galay dablay si culus uhubaysnayd oo ay soo abaabuleen kontarabandisteyaashii mulkiilaha ka ahaa labadii baabuur ee kontarabaanka ahaa. Kadibna ciidankii ayay kuqaadeen weerar qorshaysan oo ay afarta geesba kaga rideen ciidanka iyagoo rabay inay si xoog ah labada baabuur kufurtaan. Waxayna qiyaas ahaan tirada dablaydu dhanayd 200 oo hubaysane. Ciidankuna waxay kudagaalameen isdifaacid iyo inaysan gawaadhida sharci darada ahi gacantooda kabixin. Waxayna ciidanku halkaa kufashiliyeen dagaalkii sharci darada ahaa ee lagu soo qaaday. Sidaas bayna dhacdadu ahayd.
Iskusoo wada duuboo, waxgaradka degmada gaashaamo ayaa canbaareeyay kontarabandistayaasha bilaa sharciga ah ee gabbaadka kadhiganaya shacabkooda kadibna gaysanaya dhibaatooyinka noocan oo kale ah. Waxayna hoosta kaxariiqeen inaysan marnaba ka ogolaanaynin kontarabandisteyaasha falalka argagixiso ee noocan ah oo ay hada kadib meel uga soo wadajeedsan doonaan iyagoo waliba si gaar ah ciidamada ugala shaqayn doona arimaha kontarabanka iyo ladagaalanka argagixisada.
Hadaba Su’aasha ubaahan inay kajawaabaan dadkan beenta iyo barobagandada quuta Ee inay runta sheegaan ay ceeb kutahaay ee bilaash xaytayaasha ah dagaalka ay qaadday dablay hubaysan oo xoog iyo awood isbiday inay usheegtaan ciidan si sharci ah ugu jira shaqadiisii qaranimo dhimashada ka soo gaadhaymaxasuuqbaa mise waa dad xaqdaro iyo xoog wax ku doonayay oo ku fashilmay weerarkii gardarada ahaa ee ay soo qaadeen. Ciidankuse inuu iska difaaco weerarka gardarada ah ee ay ku soo qaadeen dableyda hubaysan oo fulinayay qorshe kontirabandhistayaal iyo kuwa Alshabaab ah oo ku sameeyay ciidanka jidgooyo islmarkaana deegaankii nabada ahaa ka abuuray fal argagixiso oo sababay khasaare labada dhinacba ah?
Su’aasha kale waxay tahay soo ma fiicna cid kasto oo ka hadlaysa arintan inay xaqiiqada ka hadasho ileen been iyo nacnac barobagaando ah oo ay ku hadleen dad qurba joog ah oo nolosha ka dhacay iyo dad muuqasare uga eg odayaal iyo duqey samokatalis ah balse hadaladoodu iyo ficilkoodu uuna sidaad ahayn waxa ay ku hadleen ee beenta iyo cadhiifada huwan ee aan nabadgalyo waxkataraynin sow dadka waxgaradka ah waajib kuma aha inay xaqiiqada ka hadlaan oo ay sheegaan sida wax udhacay
Shirkii maanta ka dhacay degmada Gaashaamo ayaa waxuu jawaab ay waxkabartaan u diray dadkaas aan horey u soo sheegnay. Waxayna shacabka gaashaamo si dhab ah oo maqal iyo muuqaal ah ugu jawaabeen sidan:-
Hadaaan nahay odayaasha iyo waxgaradka reer gaashaamo waxaan aad uga xunahay weerarkii gardarada ahaa ee ay soo qaadeen dableydii sida khaldan loo soo abaabulay. Waxaana ka bixineynaa raaligalin balaadhan waayo arintaas ma ahayn dhaqan lagu yaqiinay dadka reer gaashaamo ee waa fal aad u foolxun in ciidan tirayar oo shacabkoodii si kalsooni leh udhexsocdey jidgooyo lagu sameeyo. Waxaan kaloo ka xunahay dhibaatadii iyo khasaarihii ku yimid labada dhinac waayo dableydii hubaysneyd ee meesha ku dhimatay waxay isugu jirtay dad markaas un qoryaha loosoo dhiibay oo si khaldan loo soo abaabulay balse ku dhintay dagaal iyo jidgooyo ay iyagu ku sameeyeen ciidanka iyo kuwa horeyba ugu jiray kaganacsiga kontirabaanka.
Sidaa tarteed waxay odayaashu aad ula yaabeen oo ay sheegeen inay khaldanyihiin dadka turjimka khaldan ka bixinaya ee beenta iyo hadalka bilaashka ah waxtar kadhigaya. Sidoo kale waxay odayaashu sheegeen in meelkastaba hajoogaanee uu shacabka reer gaashaamo yahay dad itoobiyaan ah oo nabadgalyo ku nool. Waxayna uga digeen beenquutayaasha inay faraha kala baxaan faragalinta beenta ay waxtarka ka dhigayaan. Waxaa kale oo intaa ay ku dareen in dhiiladan ka dhacday jidka boodadheere mooyee aysan jirin wax dhib ah oo dhexyaalay ciidanka iyo shacabka
Sidoo kale waxay hadalkoodii ku soo gunaanadeen in dadka aaminsan fikirada Alshabaabka ah ee raba inay si khaldan uga faa’iidaystaan dhacdadan si ay ufushadaan fikiradooda argagixisinimo iyaga oo iska dhigaya inay beel ka soo jeedaan oo ay ka hadlayaan danaheeda in shacabka reer gaashaamo uu yahay dad walaalo ah islamarkaana dawladu iyo shacabkuba ay fahansanyihiin ujeedada beenquutayaasha
Hadaba dadka ka soo jeeda hadhaagii UBBO ee iska dhigaya inay ka soo jeedaan beel islamarkaana iska dhigaya inay ka hadlayaan danaheeda si ay u fushadaan UBBOnimadooda fashilantay waxaan leenaahay dadku waa walaalo shacabka iyo dawladiisuna si fiican ayay idiin fahansanyihiin ubbooy
Waxaa amaan iyo kudayasho mudan sida dheelidatiran ee aysan cadiifadi ku jirin ee ay u hadleen odayaasha sharafta leh waayo waxay muujiyeen inay yihiin samokatalis iyo waxgarad.
Dhanka kalena ciidanka dawladu waa mid ku dhisan aragti shacab iyo mid dumuqraadiyeed oo ah inuu dagta qoriga usudhan kaga difaaco shacabk dhamaan cadowga sida UBBO iyo Alqushaash. Mana dhicikarto dadkiisa sharafta leh inuu haba yaraatee wax dhibaato ah u geysto. Haday dacdose in ninkamid ah uu khalad galo waxaa hortaala maxkamad iyo in danbigiisa lagu qaado.
Ugu danbeyna masuuliyiinta ka hadashay dhanka ciidanka Qaranka, ciidanka Federal booliska, ciidankaGaarka ah iyo xukuumadaba waxay sheegeen inay aad ugu xunyihiin sida ay wax u dhaceen kadibna waxaa si wadajir ah la’iskula qaatay in hal meela looga soo wada jeedsado kontrabaandhiistayaasha iyo waxkasta oo dhib ku ah nabadgalyada iyo xasiloonida shacabka DDSI, gaar ahaan shacabka reer gaashaamo. Waxayna xukuumada iyo shacabkuba si weyn canbaareyn kulul ugu soo jeediyeen dadkii ka danbeeyay weerarka lagu qaaday ciidanka dawlada
argagixiso, baabuur, DDSI, UBBO
Dawlada Puntland Oo Damaaciday Xubnaha Siyaasada Dawlada Jubaland Euro 2016: English and Russian fans clash in Marseille
Degdeg:- Dad ay soo Abaabushay Madaxtooyadu oo Caawa Weerar Qaawan ku soo...
Shirqool lagu khaarijin rabay M/weynaha DDS Itoobiya oo la tuhunsanyahay in...
Degdeg:- Naxdin Baabuur Xamuula oo Wiil Yar Ku Jiidhay Magaalada Boon
May 08, 2016 0
Xog:- Muslimiinta KENYA oo Lagu Bilaabay Falal Argagax Leh Kadib Markii Loo...